-अशोकसमशेर राणा-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(हिमालयन बैंक लिमीटेड) अहिलेको बैकिङ परिदृश्यलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? अहिलेको हामो बित्तीय क्षेत्रको वृद्धि राम्रै भइरहेको छ । पुस मसान्तभित्र धेरैजसो वाणिज्य बैंकहरुले ८ अर्ब पूँजी पनि पुर्याए । ७ वटा जति बैंकको पूँजी पुगेको थिएन, तर उनीहरुले पनि हकप्रद र बोनस सेयर दिएर पूँजी पुर्याउने...
दीपक मल्होत्रा(अध्यक्ष)-मोवाइल फोन इम्पोर्टर अशोसिएसन प्रविधिले निकै ठूलो फड्को मारिरहेको छ । छोटो अवधिमा धेरै कुराहरु देख्न र प्रयोग गर्न पाइँदैछ । तपाई देशको अग्रणी मोवाइल आयातकर्ता हुनुहुन्छ, अहिलेको मोवाइल बजारलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ? -पछिल्लो समयमा मोवाइल बजार निकै धेरै बिस्तार भइसकेको छ । आगामी दिनमा थप बिस्तार हुने उस्तै...
-भरतराज ढकाल(सीइओ)-मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमीटेड नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा कालोबादल मडारिन थाल्यो भन्छन् कतिपयले । यही बेलामा मुद्धतीको ब्याजदर वृद्धिको होडबाजी छ । चर्को दरमा निक्षेप लिनुपर्ने अवस्था छ, यसले फेरि पनि ब्याज खर्च औधी बढ्ने देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरुबीचको निक्षेप तानातानको होडबाजीले विकास बैंकलाई चाहि खासै नछोएको हो...
राजेन्द्रप्रसाद पौडेल(सीइओ)-सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंक लिमीटेड हाम्रो बैकिङ क्षेत्र अहिले कुन अवस्थामा हो ? -बैकिङ क्षेत्र बजारमा हल्ला फैलाइएको जस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा हुँदै होइन । किनभने अब बैकिङ क्षेत्रको बल्ल प्रस्फूटन सुरु हुन्छ । देशको आर्थिक र राजनीतिक अवस्थामा समेत अब सुधार हुनेछ । अहिलेको परिवेशमा जुन हिसाबले नेप्से...
‘ज्वाइन्ट भेञ्चर भएर पनि हाम्रो बैंकको निर्णय विदेशमा हुँदैन’
सुनिल केसी–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(एनएमबी बैंक लिमीटेड) पहिलो त्रैमासको बित्तीय विवरणमार्फत आफूलाई सिंगो उद्योग संकटउन्मुख हुँदा समेत थप भरोसायोग्य बनाएको एनएमबी बैंकले हालै बैंक अफ दि इयरको प्रतिष्ठित उपाधि पाएको छ । तपाईहरुले नै यो उपाधि पाउनुपर्ने कारण ? -बैंक अफ दि इयर २०१७ को उपाधि पाउनु पछाडिको मुख्य कारण–हामीले फरक ढंगले...
मनोज ज्ञवाली, डेपुटी सीइओ-ज्योति विकास बैंक नेपालका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको अहिलेको अवस्था के हो ? पहिलो त्रैमासमा त अधिकांश नाफा घटेको देखियो नि ? प्रोफिट घटेर अधिकांश लगानीकर्ता निराश भए नि ? प्रोफिट घटेर लगानीकर्ता निराश भए भन्ने पाटोलाई दुुई हिसाबले बुुझौ । प्रोमोटर तथा सेयरधनीले हिजोअस्ती ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म...
कृष्णराज लामिछाने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-महालक्ष्मी विकास बैंक लिमीटेड कैलाश विकास बैंक छाडेर केही समयको ग्यापपछि फेरि विकास बैंक नै रोज्नुु भयो नि ? -मैले २९–३० वर्षमा जे गरेँ, त्यो बैकिङ नै थियो । यो अवधिमा मैले सिकेको कुरा पनि बैकिङ नै हो । कैलाश विकास बैंक छाडेपछि मलाई केही नयाँ बिमा कम्पनीहरुबाट समेत प्रस्ताव आएको थियो, तर मैले...
विघटित दोलखा जिल्ला पञ्चायतको सदस्य हुँदादेखि नै राजनीतिक र सामाजिक अभियानको नशामा फसेका ६६ वर्षीय पदमबहादुर शिवाकोटीले त्यसपछिका वर्षहरुमा समेत यी दुुई क्षेत्रबाट आफूलाई बाहिर राख्न सकेनन् । ०४६ सालमा बहुदल आएपछि उनी सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको राप्रपामा केही समय सक्रिय भए । तर, राप्रपाको फूट्ने र जुट्ने प्रवृतिबाट दिक्क भई लामो समय...
अञ्जन श्रेष्ठ, अध्यक्ष- नेपाल अटोमोवाइल डिलर्स एशोसिएसन तथा सभापति : उद्योग समिति– उद्योग वाणिज्य महासंघ हरेक वर्ष आयोजना हुने नाडा अटो शोको सबै तयारी सकियो ? तयारी लगभग पूरा भएको छ । भोलि(मंगलबार) नाडा अटो शोको बिहान १० बजे औपचारिक उद्घाटनको कार्यक्रम राखिएको छ । आज राति अबेरसम्म काम गरेर बाँकी रहेका स्टल, प्रदर्शनीस्थल तयारीको...
किरणकुमार श्रेष्ठ, सीइओ-राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुबीच मर्जर र एक्वीजिसनको क्रम उत्कर्षमा छ । तपाईंहरुलाई चुक्तापूँजीको हिसाबले समस्या छैन । यहीबेला एनआइडीसी डेभलपमेन्ट बैंकसँगको मर्जरको काम पनि सुरु भएको छ, कहाँ पुुग्यो प्रक्रिया ? एनआइसी डेभलपमेन्ट बैंकसँग एक्वीजिसनको प्रक्रिया निकै अगाडि बढेको छ । गत चैतमा...
माधव निर्दोष, कार्यक्रम संयोजक : बैंकिङ एक्स्पो–२०१७ तथा अध्यक्ष :मिडिया इन्टरनेशनल देशमै पहिलोपटक शुक्रबारदेखि तीन दिने बैंकिङ एक्स्पो सुरु गर्नुभएको छ, कस्तो छ जनसहभागिता ? नेपालमा नै पहिलोपटक बैंकिङ एक्स्पो सुरु भएको छ । हिजो पहिलो दिन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले कार्यक्रमको भव्य समारोहका बीच उद्घाटन...